स्वस्थ्य बच्चा प्रतिस्पर्धा हुने::Online News Portal from State No. 4
स्वस्थ्य बच्चा प्रतिस्पर्धा हुने
बागलुङ जेसीजको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम शनिबार देखि
बागलुङ, २७ भदौ – बागलुङमा स्वस्थ्य बच्चा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । बागलुङ जेसीजले भदौ २९ गते ६ महिनादेखि ५ बर्ष उमेर समुहका बच्चाहरु बीच यो प्रतिस्पर्धा गराउन लागेको शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन विच जानकारी गराएको हो । बच्चाको पोषण, उसले पाएको खोप, उमेर अनुसारको उचाई, मोटाई र बच्चाको स्वास्थ्य लगायतका बिषयमा परिक्षण गरेर प्रतिष्पर्धा गराउन लागिएको जेसीज बागलुङका अध्यक्ष एन्जील शाक्यले बताए । धौलागिरी अञ्चल अस्पतालका स्वास्थ्य प्राबिधिकहरुको सहयोगमा प्रतिष्पर्धा गराउन लागिएको हो । प्रतिपर्धामा उत्कृष्ट हुने बच्चालाई स्वथ्य बच्चा घोषणा गरिने र उचित पुरस्कार समेत प्रदान गरिने शाक्यले बताए । जेसीज सप्ताह अन्र्तगत यस्तो प्रतिष्र्धा गर्न लागिएको हो । सप्ताहको लागि जेसीजले बिभिन्न सात दिवसीय कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ ।
सप्ताहको पहिलो दिन उद्घाटन कार्यक्रम र युवा सम्मान आयोजना गरिएको छ । दोस्रो दिन स्वस्थ्य बच्चा प्रतिस्पर्धा र ४१ औं स्थापना दिवस मनाउने, तेस्रो दिन स्व. सत्यदेवी स्मृति स्लो–बाईक रेस, चौथो दिन अन्तर बिद्यालय स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता, पाँचौ दिन बोर्ड व्यवस्थापन, छैटौं दिन अन्तरक्रिया कार्यक्रम र सातौं दिन मा.वि. स्तरीय वक्तृत्वकला प्रतियोगिता आयोजना गरिएको कार्यक्रम संयोजक आकृती भण्डारीले जानकारी दिईन् । २८ गते देखि सुरु हुन लागेको जेसीज सप्ताह अन्र्तगतको विभिन्न कार्यक्रम विच स्वस्थ्य बच्चा परीक्षण पनि गर्न लागेको हो । जेसीजले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । कार्यक्रममा १ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च हुने अध्यक्ष शाक्यले बताए । कार्यक्रम एञ्जील शाक्यको अध्यक्षता, रामचन्द्र गौतमको स्वागत र सौरभ श्रेष्ठको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।